कथा : फेसबुककी केटी – MySansar
कथा : फेसबुककी केटी
Posted on January 17, 2015 by mysansar
आज त म पनि बाठैँ बनेँ, फेसबुक खोल्नुसँगै च्याटलाइन अफ गरे, पेज खुलेसँगै फे्रण्ड, म्यासेज र नोटिफिकेसन्स सिम्बोलमा राताम्बे देखेँ र हेरेँ मेरा सबै फोटा र स्टाटसमा एक एक लाइक बढेको थियो, त्यो सबै त्यही नामको थियो, जुन हिजो च्याटमा कट्टी भएको थियो । म्यासेज बक्समा पनि तपाई त कस्तो मान्छे त्यतिमा पनि रिसाउने हिजोदेखि च्याटमै हुनु हुन्न उही नामको सन्देश थियो । मैले बाल मतलब गरिँन बरु अफलाइन लाई अन गरेँ । केही बेरमा फेरी अर्को सन्देश आयो । आइ एम सो सरी मैले बाध्य भएर भनेँ इट्स ओके । हैँन, यी केटी मान्छे कति नखरा, कसरी केटा मान्छेलाई आफ्नो बनाउने, प्रभावित पार्ने कति जान्या…। छिनमै रुने, छिनमै हाँस्ने क्या गजबको कला । हुन त म पनि कम हैन, अरु भए १÷२ हप्ता नै बोल्दैनथेँ होला तर केटी भएर २४ घण्टा नपुग्दै कट्टी फिर्ता गरेँ । तर यो मेरो मात्रै हैन, सबै लोग्ने मान्छेको विशेषता हो । यो सँगै म उनीसँग च्याटमा गफिन थाले, सायद उनी भएरै होला, च्याटमा बस्नुको मज्जा बेग्लै हुन थाल्यो, मिनेट, घण्टा हुँदै हामी घण्टौँ च्याटमा हराउन थाल्यौँ अनि नचिनेकैँ भए पनि अन्तरंग कुरा हुन्थे, फुर्सदमा सम्झदा लाग्थ्यो भेटेरै सामीप्यता बाड्न पाए…………।
फेरि नजरलाई पुलसम्म पु¥याए, अघि नराम्रो लाग्ने पुल राम्रो लाग्छ, त्यही पुलमा निलो छाता ओढेर हातमा सानी छोरी डो¥याउँदै ऊ आई । टाढैबाट अनुहार यकिन गर्न त म सम्भव भइन तर पनि म विश्वस्त छु त्यो उही हो । लामो कपाललाई गुजमुल्टो बनाएर पछाडि बाँधिछ मोरीले । टाढाबाट देख्दा फक्रेको फूलस्तो लाग्ने, नीलो टिसर्टमा टिमिक्कको पाइन्ट, वैजनी रंगको जुत्ता कति सुहाएको मोरीलाई । सिलिक्क परेको ज्यान लचकदार हिँडाई कल्पनामै मदहोस् हुन्छु म । लाग्छ ऊ विवाहित महिला हैन, १६–१८ की झ्वाक तन्नेरी हो । सानी छोरी ठ्याक्कै मेरी छोरीजस्तै एक हात आमालाई समाउँदै अर्को हातमा आइसक्रिम खाँदै हिड्दा म बालस्वभावमा केन्द्रित बन्छु । कस्तो चञ्चल, पवित्र अनि अबोध उत्सुकता मेरी छोरीले तोतेबोलीमा बाबा भनेको स्मरण गर्छु । हैन म कस्तो हुस्सु छोरी आउने भनेपछि एक पिस चोखोपन पनि नलिई आउने, आमासँग चाहिँ बदाम खाँदै घण्टौँ गफ गरिन्छ होला । होइन–होइन कहाँ बदाम उसलाई चटपट चाहिन्छ होला म कल्पित बन्छु । नाई म कहाँ चटपट खान्छु र ! खुर्सानी र श्रीमती सम्झिएसि सातो जाने म ……………।
मेरो अन्तिम सोचाई उसको अनुहार कस्तो होला ? नराम्रो छि ः यो हुनै सक्तैन । यस्तो राम्रो कुरा गर्ने मान्छे अनि कोइली कण्ठको स्वर भएको मान्छे कसरी नराम्रो हुन सक्छ । म आफू ऐना त हेर्दिन राम्रै कहाँ हुँला र ? तर पनि म आफूलाई राम्रो सम्झन्छु, स्मार्ट ठान्छु सायद म जस्ता सबैले यस्तै ठान्छन् होला – चियोचर्चो त गर्दिन र पनि सबैको विशेषता यही हुनुपर्छ । एक्कासी बाबा भन्दै छोरीले पछाडिबाट गर्लम्म अंगालो मार्छे म छोरीलाई सम्हाल्दै उठ्छु र उ पट्टी फर्कन्छु । मेरी बुढी भन्दै थिई मैँ हुँ हजुरको फेसबुककी केटी……….। (समकालीन साहित्यबाट साभार)
6 thoughts on “कथा : फेसबुककी केटी”
रमाइलो लाग्यो .
अलि काल्पनिक बढी भयो
कथाले कुनबेला अन्त्य गर्यो थाई भएन सुरुवात मै अन्त्य थाहा भयो तर पड्दा रमाइलो नै लाग्यो Keep it up…
खासै के भनौ , चौटा खान गायकी बुडी झोलमा डुबेर मोरी ,
कथा पढ्दा पढ्दै अन्त्य कसरि हुन्छ अगाडी नै थाहा हुने
कथा नराम्रो भन्न मिल्दैन तर अन्त तिर नमिलेको जस्तो लग्यो anyway good try.